Uru n'ihi na ị na
MESOO ENWEGHỊ Mgbakwụnye
Irè protocol nke ị na-adịghị mkpa iji inyeaka anchoring usoro maka eze Ndahie.
Deba aha na debeere ebe ọgwụ na-amalite a usoro ọzụzụ na anyị video N'ezie,.
Akwụkwọ ikike MESOO
Mbido na free masks bụrụ na nke gụchara na finishing ọgwụgwọ ma ọ bụ bụrụ na nke ọnwụ ma ọ bụ mgbaji ọkpụkpụ nke nkpuchi.
Ị nwere ike izipu foto nke n'akara anyị mgbe niile dị nọmba ekwentị na-enweta azịza gị niile ajụjụ na àgwà nke otu, nke ga na-achịkwa na a elu mkpebi monitor kpọmkwem; mgbe onye ọrịa ka na-amụ.
Mmejuputa iwu aka na Post Production
Mbido con video, quote, mgbe niile free valet. Anyị nwekwara dị maka ọ bụla see n'oge ọganihu nke ikpe.
Gaa n'ihi na ahịa Ụlọ Nzukọ nke ọdịdị
Pịa ebe a na-arịọ maka free broshuọ na-eweta na tebụl ma ọ bụ n'ala, informational videos na broshuọ gị ọrịa.
mesoo ỌZỌ’ ZIE EZI NA Ọsọ ENWEGHỊ mgbakwunye ekpuchi na àjà ihe ọṅụṅụ uzo
Biomechanics emejuputa na abụọ set of aligners mmezi UP na UP-ebunye ìhè na mgbe nile na-agha na bụla nzọụkwụ na nsogbu isi (DIVOT) Family’ mere site na ụlọ ọrụ iji belata niile criticality nke nkpuchi aligners mono. Na extrusions na rotations enweghị ekekọta. Na ihe ire ụtọ na ịdị ọcha masks na a mma ndidi nnabata, ekele na "Ọchị Glass" technology.
Edebere Area Dọkịta
Echekwabara Area Agents
Iji nye ndị kasị mma ọrụ a na saịtị na-eji kuki. Gaa n'ihu na-eme nchọgharị na saịtị authorizes ojiji nke kuki.m na-anabata Chọpụta ihe
- The ụghalaahịa kwuru na ha na nwoke logos na-adịghị ekesịpde Paul Protani Njirimara ga nke metụtara ụlọ ọrụ. All logos na ụghalaahia bụ nke ndị nwe ha na-kwuru maka mfe search maka dakọtara ngwaahịa. Iwu nzuzo dị ka D.Lgs.196 / 2003 -